Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguSabine
Wamkelekile kwindlu kaSabine! Amagumbi amabini eendwendwe akulindele kwindawo efudumeleyo, nje iikhilomitha ezili-13 ukusuka eCahors.
Isidlo sakusasa kunye neelinen zibandakanyiwe.
Ubuninzi bomthamo: Igumbi lokulala eli-1 kubantu abayi-2 + igumbi eli-1 kwi-2 yokulala okongeziweyo.
irhafu yabakhenkethi € 0.75 ngomntu omdala kunye nobusuku nganye kufuneka ihlawulwe ngqo kuSabine ekufikeni kwakho, enkosi ngokuqonda kwakho.
Ungazikhathazi nganto! Yonke into icwangcisiwe, kude kube isidlo sakusasa kunye neemveliso ezitsha kunye nezinto eziphilayo. Yonke into yenziwe ekhaya apha ukuqala usuku kanye emva kobusuku obunoxolo.
USabine uya kukuvuyela ukulungiselela isidlo sasemini okanye isidlo sakusihlwa ngokwezinto ozithandayo.
Kufuneka nje uyonwabele indalo oyinikwayo ecaleni kweLothe!
4.77 · Izimvo eziyi-129
Idama lokuqubha likamasipala (elivulwa ehlotyeni) umgama oyikhilomitha e-1 ngee-euro ezi-2.
Indlu ibekwe kwiindawo eziphakamileyo zelali
Umbono weNuzéjouls kunye neenkuni
Umbuki zindwendwe ngu- Sabine
J'aime recevoir et partager, notamment à travers la cuisine, une passion qui me vient de mon enfance et de mes origines Arménienne et Libanaise (grand choix de plats végétariens). La musique est très présente dans ma vie de tous les jours, mais j'apprécie également le calme et le chant des oiseaux.
J'aime recevoir et partager, notamment à travers la cuisine, une passion qui me vient de mon enfance et de mes origines Arménienne et Libanaise (grand choix de plats végétariens).…
Ukusuka kwimvelaphi yam, ndithanda ukunika iimezzes ezisulungekisiweyo, ezenziwe ekhaya ngokupheleleyo ngeemveliso ezintsha: Lebanese tabbouleh, hommos, abou ganoush, beureks... Izitya esabelana ngazo neminwe yakho, phakathi kwezihlobo, nosapho ...
Kodwa ukuba ngethamsanqa ufuna ukuntywiliselwa ngokupheleleyo kumhlaba weLoti, ndiyakwazi ukwenza imenyu yemveli esekwe kwiimveliso zasekhaya ezikhethiweyo kwiimarike. Ukutsha kunye nomgangatho uqinisekisiwe!
Ukusuka kwimvelaphi yam, ndithanda ukunika iimezzes ezisulungekisiweyo, ezenziwe ekhaya ngokupheleleyo ngeemveliso ezintsha: Lebanese tabbouleh, hommos, abou ganoush, beureks... Iz…
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 18:00 - 21:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nuzéjouls